GAZİBİS Iindawo zeSibonelelo seNtlawulo yeNtlawulo kunye noTshintsho lweLungu | RayHaber | Uloliwe | Indlela enkulu | imoto cable
ikhayaETURKEYUmzantsi-mpuma we-Anatolia Region27 GaziantepI-GAZİB StationsS yeeNtengiso zeSibonelelo seNtlawulo yeNtlawulo kunye noTshintshiselwano lwamalungu
07 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 27 Gaziantep, Umzantsi-mpuma we-Anatolia Region, JIKELELE, Highway, Systems Wheel Wheel, ETURKEY 0
uluhlu lwamaxabiso kunye notshintshiselwano lwamalungu
UMasipala weNqila yeGaziantep, ukwenzela ukukhuthaza ukusetyenziswa kweebhayisikile njengezothutho njengezizathu zokuhamba kunye nezemidlalo; I-GAZİBİS ijolise ekusasazeni iBisiklet Smart Bikingcle Sharingcle System Gaziantep kuyo yonke iGaziantep, ngaloo ndlela ibonelela ngothutho olufanelekileyo nolungqongileyo nolungendawo kubo bonke abathanda iibhayisikile.
NgeNkqubo yokwabelana ngebhayisikile eyi-Smart, abathandi bebhayisekile abayi kunyanzeleka ukuba bahambe ngeebhayisikile, banokuqesha iibhayisikile kuso nasiphi na isikhululo seGAZİBİS kwaye babashiye nakwesiphi na isikhululo seGAZİBİS.
Ungalilungu kanjani leNkqubo ye-GAZİBİS?
IKalealti, Ibala, i-15 kaJulayi, iManoglu Park (iSankoPark), iMasal Park, iWonderland kunye nesitishi saseGaün 7 yasungulwa ngenkqubo yebhayisekile ye-108, inokuthathwa kuzo zonke iindawo zokuthengisa iGadiantep Card Gadiantep Full Card, eseBalikli (ngasemva kwe-Omeriye Mosque) iGadiantep Card Isetyenziselwa amakhadi ancitshisiweyo kunye namakhadi etyala. Ayinakwamkelwa ngamakhadi asimahla. Umyinge weyure ubizwa njenge1 TL.
Ukuba sele ulilungu lenkqubo yeGazibis, ungadlulisela ubulungu bakho kwiKhadi leGaziantep. Omele ukukwenza kukubhalisela inkqubo yeGazibis kunye nekhadi lakho leGaziantep ngokusebenzisa ifomu ye-intanethi onokuthi ulugcwalise kwimizuzu ye-5.
Ngexesha lobulungu, ulwazi lomntu bufumaneka kwaye ikhontrakthi isayiniwe. Ulwazi malunga nezi zinkcukacha unokulufumana kwisoftware ye-kiosk nakwizikhululo ezineelebhile zolwazi.
Ugunyaziso oluvulekileyo lwe25 TL lwenziwe kwakhadi lokuthenga ngetyala ngeKhadi letyala, kwaye emva kokubuya kwebhayisekile, intlawulo yokusebenzisa iyabanjiswa kwaye imali eseleyo iyarhoxiswa ngenkqubo emiselwe yibhanki. Amakhadi etyala kufuneka avulekele ukuthengwa okubonakalayo.
Isikhululo sebhayikhi se-7 sibekwe esweni sisonke ziikhamera ze-15 kwi-Intanethi. Ulawulo kunye nokugcinwa kweebhayisikile ze108 ziqhutywa yiGaziulaş.
Iibhawuthi ezithathwe kuso nasiphi na isitishi zingashiywa kwezinye izitishi. Iibhayisikile ze-3 zinokuqeshiswa ngekhadi letyala kwaye yi-1 kuphela enokuqeshiswa yiKhadi leGaziantep. Ixesha lokubuya emva kokuthengwa kwebhayisekile lilinganiselwe kwiiyure ze-24. Kwimeko yokuphelelwa kwexesha kwe-24, iinkqubo zolwaphulo-mthetho ziya kuqaliswa kuba umzamo wokubanjwa uthathelwe ingqalelo, obandakanyiwe kwisivumelwano.
QAPHELA: Inkonzo yobulungu kwifom ye-intanethi isebenza kuphela kwabo babhaliswe eGaziantep. Abo babhaliswe kwezinye izixeko kufuneka beze eGaziantep Card Central isebe benze ubulungu babo ngeGaziantep Card. Ubhaliso kwiZiko lokuSebenza leKhadi le-Gaziantep simahla, kwanele ukuba nekhadi lakho lesazisi kunye neKhadi leGaziantep. Ukuba awunayo iKhadi le-Gaziantep okwangoku, kunokwenzeka ukuba uyifumane kwiZiko lokuTshintshela kweKhadi leGaziantep ngomrhumo.
Ubulungu kwi-GAZIBIS kunye neKhadi le-Gaziantep
IGazibis ngoku ikwenkqubo yeGaziantep Card. Ungasebenzisa iKhadi lakho leGaziantep (ngaphandle kwendlela yasimahla / yamakhadi asimahla) oyisebenzisayo ngebhasi, itram kunye nolunye uhlobo lwendawo yokuqasha iibhayisikile ezivela eGazibis.
Ukuba sele ulilungu lenkqubo yeGazibis, ungadlulisela ubulungu bakho kwiKhadi leGaziantep. Omele ukukwenza kukubhalisela inkqubo yeGazibis kunye nekhadi lakho leGaziantep ngokusebenzisa ifomu ye-intanethi onokuthi ulugcwalise kwimizuzu ye-5. Ngoku ungaqala kolu khetho lulandelayo.
Ukuba unemibuzo malunga ne-0342 329 45 45 ifowuni kunye ne-0533 784 27 27 ungafumana inkxaso ngokukhawuleza kwimigca ye-whatsapp.
QAPHELA: Inkonzo yobulungu ngefom ye-intanethi isebenza kuphela kwabo babhalise ngokuhlala eGaziantep. Abo bahlala kwezinye izixeko kufuneka beze eGaziantep Card Central Branch benze ubulungu babo ngeGaziantep Card. Ubhaliso kwiZiko lokuSebenza leKhadi le-Gaziantep simahla, kwanele ukuba nekhadi lakho lesazisi kunye neKhadi le-Gaziantep. Ukuba awunayo iKhadi le-Gaziantep okwangoku, kunokwenzeka ukuba uyifumane kwiZiko lokuTshintshela kweKhadi leGaziantep ngomrhumo.
I-GAZİBİS Indlela yokurenta?
Ungayithenga njani Ibhayisekile ngeKhadi leGaziantep ukusuka kwisikhululo seGAZİBİS?
1. INYATHELO:Ukukhetha Uhlobo lokuSebenza: Cofa u-Al Thenga ibhayisekile ”iqhosha.
2. STEP : Isaphulelo seGaziantep okanye ikhadi elipheleleyo UMBHALI weKhadi indawo. Le nkqubo ithatha malunga nemizuzwana ye-5.
STEP 3:Ngenisa iphasiwedi yakho yeKhadi leGaziantep. (Le phasiwedi yathunyelwa kwifowuni yakho ngexesha lokubhaliswa kwe-Intanethi.)
STEP 4:Ukuba ikhadi lakho alivalwanga kwaye unesabelo esaneleyo (ubuncinci be-5 tl) inkqubo iya kukwabela ibhayisekile. Ungayibona inombolo yebhayikhi esikrinini. Inkqubo ikhetha ibhayisekile ngokwayo.
STEP 5:Ungayithatha ibhayisekile ngenani elibonisiweyo kwisibonisi ngokuyiphakamisa kwisitshixo sokuvala ngaphakathi kwemizuzwana ye-20. Izibane ezibomvu ze-LED kwisitshixo kufuneka ziguqukele eluhlaza. Ukuba i-20 ayamkelwanga ngemizuzwana, inkqubo iya kuvalelwa. Kule meko, phinda inkqubo. Akukho ntlawulo yongezelelweyo.
STEP 6:Jonga uzinzo lwebhayisekile kwimizuzwana eyi-60 emva kokuyithatha. Ukuba akukho ngxaki ungaqala ukuyisebenzisa. Nceda ubuyisele ukuba kukho impazamo. I-60 isimahla simahla kwibhayisekile ebuyisiweyo kwimizuzwana. (Nceda ujonge ibhayisekile ofuna ukuyithenga kuqala.)
QAPHELA: Unokwenza la manyathelo angasentla ngonqakrazo 'BUY NGOKUKHETHA I-BICYCLE' iqhosha.
XA UKHETHA; Ekupheleni kokusebenza, emva kokuba ulwazi lwempumelelo yokusebenza lubonisiwe kwiscreen, yiya kwibhayisekile oyithethileyo kwaye uthathe ibhayikhile kwindawo oya kuyo. Kuphela yi-1 (enye) ibhayisekile enokuthengwa ngekhadi lobulungu.
Ungayithenga njani Ibhayisekile ngeKhadi letyala kwiSikhululo se-GAZİBİS?
I 1.A:Ukhetho loThetho lokuSebenza: Ukucofa "Thenga ikhadi letyala" iqhosha.
2. ISIQINISO:Faka inombolo yakho yefowuni kwisikrini kwaye ucofe iqhosha lokuqinisekisa.
3. ISIQINISO:Ngenisa ulwazi lokungena kwikhadi lokuthenga ngetyala kunye nenani leebhutsi ofuna ukuzirenta esikrinini, kwaye ucofe iqhosha lokuQinisekisa.
4. ISIQINISO:Faka ikhowudi yokuqinisekisa ethunyelwe kwifowuni yakho ngeSMS kwaye ucofe iqhosha lokuqinisekisa.
5. ISIQINISO:Faka iinombolo zebhayisekile ofuna ukuzirenta kwaye ucinezele iqhosha lokuQinisekisa.
6. ISIQINISO:Emva kolwazi oluyimpumelelo lwentengiselwano ebonakalayo kwiscreen, yiya kwiibhayisikile ozichazileyo kwaye ususe ibhayisekile kwisitayile ngaphakathi kwemizuzwana ye-20. Izibane ezibomvu ze-LED kwisitshixo kufuneka zijike zibe luhlaza. Ukuba i-20 ayamkelwanga ngemizuzwana, inkqubo iya kuvalelwa. Kule meko, phinda inkqubo. Akukho ntlawulo yongezelelweyo.
Uyibuyisela njani ibhayisikile kwiZiko leGAZİBİS
STEP 1:Beka ibhayisekile oyisebenzisayo kwenye yeendawo zokuzivalela ezingenanto. Isikhululo okanye indawo etshixwayo inokuba yahlukile.
STEP 2:Emva kokufaka, linda malunga nemizuzwana ye-5 kwaye ubone ukuba i-LED kwindawo yokukhiya ibomvu.
STEP 3:Qinisekisa ukuba ibhayisekile ivaliwe ngokuyiphakamisa kancinci. Ukuba ibhayisekile ayitshixi, zama enye indawo yokutshixa.
STEP 4:Emva kokuba utshixe ibhayisekile, nceda ucofe iqhosha elithi "BICYCLE DROP" ukulahla ibhayisekile yakho kwikhadi lakho leGaziantep.
(Ukuba uthengile ngekhadi letyala, uyakufumana umyalezo ngefowuni yakho nangona ikhutshiwe. Akunyanzelekanga ukuba usebenzise iqhosha elithi "BICYCLE DROP")
STEP 5:Funda iGadiantep Card yakho kumfundi. Oku kunokuthatha ukuya kwimizuzwana ye-3, musa ukukhupha ikhadi lakho kwaye ushiye isitishi ngaphambi kokuba kugqitywe. (Olu tshintshiselwano aludingeki ukuba lufunyenwe kunye neKhadi letyala.)
QAPHELA: Iibhayisekile ezintsha azinakuthengwa ngaphandle kokuba kugqitywe inkqubo yokubuya ngebhayisekile !!! Emva kokubuya Nokuba ikhadi alifundwanga, inkqubo imisela umrhumo ngokwexesha ubuyiswe ngalo ibhayisekile. Akukho xesha longezelelweyo longezwa.
Ukuba kukho ingxaki ngebhayisekile yakho
STEP 1:Ukuba ibhayisekile ibonakalisa naziphi na iingxaki, shiya ibhayisekile ibuyele nakweyiphi na indawo esitishini ngaphakathi komzuzu (1). Akukho ntlawulo.
STEP 3:Qinisekisa ukuba ibhayisekile ivaliwe ngokuyiphakamisa kancinci.
STEP 4:Ukuthenga ibhayisekile kwakhona, swayipha ikhadi lakho kwakhona kwaye uthathe enye ibhayisekile yenombolo eboniswe kwiscreen.
STEP 5:Emva kokujonga ibhayisekile yakho, ungasishiya isikhululo.
Nceda ujonge ibhayisekile ofuna ukuyithenga kuqala !!!
Ukuhanjiswa simahla nge-GAZIBIS
Ukuphumelela kwakho okokuqala ngqa kwiibhasi zikamasipala kunye neenqanawa ezisetyenziswa nguGaziulaş simahla kwiyure yokuqala emva kokuqeshiswa kwebhayisekile yakho usebenzisa iKhadi lakho leGaziantep. Oku kuthetha ukuba xa usenza inxenye yohambo lwakho ngebhayisekile kunye nenxalenye yezothutho lukawonkewonke, uhlawula ibhayisekile.
Isitishi seSankopark Gazibis
Isikhululo saseKalealtı Gazibis
Isikhululo senkundla yeGazibis
Isikhululo se-Wonderland Gazibis
Isikhululo seYunivesithi yaseGazibis
Isikhululo sikazwelonke sedemokhrasi
Ukufikelela kwimephu yeGazibis buraya Cofa apha!